Okwu | January 2020
Okwu 2016 Nkuzi maka Ndị Amalite: Ịmezi Ihe Ndị Kasị Mma
Ezi ụbọchị. Ubochi nke a ga-etinye aka na nchịkọta ederede ọhụrụ nke Microsoft Word 2016. Nkuzi (ọ bụrụ na i nwere ike ịkpọ ha na) ga-enye ntụziaka ntakịrị maka otu esi arụ otu ọrụ. M kpebiri iwepụta isiokwu nke nkuzi, dịka m na-ejikarị enyere ndị ọrụ aka (t.
Tinye akara akara na Celsius na akwụkwọ Microsoft Word
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-arụ ọrụ na ederede ederede na MS Word, ọ ga-adị mkpa iji gbakwunye otu agwa na-adịghị na keyboard. Ọ bụghị ndị ọrụ niile nke usoro a magburu onwe ha maara banyere nnukwu ọbá akwụkwọ nke ihe odide pụrụ iche na ihe ịrịba ama dị na ya. Nkuzi: Otu esi etinye akara ntinye Otu esi tinye ntinye anyi edeela banyere igbakwunye ihe odide na akwukwo ederede, n'isiokwu a anyi ga ekwu banyere otu esi tinye Celsius Celsius n'ime Okwu.
Ịmepụta ihe ederede na okwu MS Word
Ihe edeturu na Microsoft Word bụ ụzọ dị ukwuu isi gosi onye ọrụ ihe ọ bụla mehiere na enweghị nchekasị o meworo, gbakwunye na ederede ma ọ bụ gosi ihe dị mkpa ka a gbanwee na otu. Ọ dị mfe iji usoro a rụọ ọrụ mgbe ị na-akwado akwụkwọ. Ihe omumu: Otu esi tinye ihe odide ederede na ederede Okwu na Okwu ka agbakwunyere na ndetu di iche iche nke di n'olu nke akwukwo.
Otu esi eme ka ederede ederede n'ime okwu Microsoft
Mgbe ị na-arụ ọrụ na MS Okwu, ọ na-enwekarị ike ihu mkpa ọ dị iji gosi ihe osise na ihe oyiyi. Anyị edeworị banyere otú ọ dị mfe iji gbakwunye foto, otu esi ede ya na otu esi esi kpuchie ya ederede. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa iji mee ka ederede ederede ederede, nke dị ntakịrị mgbagwoju anya, mana ọ na-ele anya nicer.
Otu esi ewepu ma ọ bụ ihe efu na MS Word
Akwukwo Microsoft Word nwere akwukwo ozo, akwukwo ozo, na otutu okwu nwere paragraf efu, akwukwo ma obu nkebi ngalaba, nke ejiri aka tinye ya. Nke a dị oke mma maka faịlụ nke ị na-eme atụmatụ iji rụọ ọrụ n'ọdịnihu, bipụta ya na mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ nye ya onye maka nyocha na ọrụ ọzọ.
Ịmepụta isi isiokwu okpokoro na ibe ọ bụla na MS Okwu
Ọ bụrụ na na Microsoft Word ị mepụtara nnukwu tebụl nke nwere ihe karịrị otu peeji nke, maka nkwekọrịta nke ịrụ ọrụ na ya, ịnwere ike igosipụta nkụnye eji isi mee na ibe ọ bụla nke akwụkwọ ahụ. Iji mee nke a, ị ga-achọ ịmepụta nnyefe akpaka aha (otu nkụnye eji isi mee) na ibe ndị ọzọ. Ihe omumu: Otu esi eme ka okpokoro di na Okwu. Ya mere, na akwukwo anyi nwere okpokoro buru ibu nke di ugbua ma o bu nani mmadu ogugu.
Anyị na-ewepu etiti na akwụkwọ Microsoft Word
Anyị edeworị banyere otu esi tinye ihe mara mma na ihe MS Word akwụkwọ na otu esi agbanwe ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere nsogbu kpamkpam, ya bụ, otu esi ewepu etiti ahụ na Okwu ahụ. Tupu ịga n'ihu na mwepụ nke osisi ahụ site na akwụkwọ ahụ, ịkwesịrị ịghọta ihe ọ bụ.
Ịdebe tebụl site na weebụsaịtị na akwụkwọ Microsoft Word
Ngwaọrụ na-arụ ọrụ na tebụl na MS Okwu na-emejuputa ngwa ngwa. Nke a, n'ezie, abụghị Excel, Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ịmepụta ma dozie tebụl n'usoro ihe omume a, ma anaghị achọkarị. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, iṅomi tebụl dị njikere na Okwu na ịkwanye ya na ebe ọzọ nke akwụkwọ ahụ, ma ọ bụ ọbụna n'ime usoro dị iche iche dị iche, abụghị ihe siri ike.
Onye nhazi akwukwo ndu na okwu Microsoft
Okwu MS 2010 n'oge ọbatara ahịa ya bara ọgaranya. Ndị mmepe nke nhazi okwu a abụghị naanị "redecorate" interface ahụ, kamakwa o mejuputara ọtụtụ ọrụ ọhụrụ na ya. N'etiti ndị ahụ bụ nchịkọta akụkọ. Ihe yiri nke ahụ dị na nchịkọta akụkọ na mbụ, ma ọ bụ naanị ihe ntinye dị iche - Equation Microsoft 3.
Otu esi eme ka nhazi ihu ala na MS Word
N'okwu Microsoft, dịka n'ọtụtụ mmemme ndị ọzọ, e nwere ụdị nhazi nke abụọ - nke a bụ ihe osise (ọ na-arụ ọrụ site na ndabara) na odida obodo, nke nwere ike ịtọ na ntọala. Ụdị nhazi nke ị ga - achọ, na mbụ, dabere na ọrụ ị na - arụ. Ọtụtụ mgbe, a na-arụ ọrụ na akwụkwọ na nhazi ihu, ma mgbe ụfọdụ, a ghaghị ịgbanwe akwụkwọ ahụ.
Gbanwe aha aha na Microsoft Word akwụkwọ
Oge ọ bụla ị mepụtara ihe odide ederede ọhụrụ na MS Word, usoro ihe omume ahụ na-edozi ọtụtụ njirimara maka ya, gụnyere aha onye edemede. E kere ihe onwunwe "Onye edemede" dabere na ozi njirimara nke egosipụta na window "Nhọrọ" (nke bụ "Nhọrọ Okwu"). Na mgbakwunye, ozi dịnụ banyere onye ọrụ ahụ bụkwa isi iyi nke aha na initials nke a ga-egosipụta na ndozi na ikwu.
Esi mee ka akara na Okwu (2013, 2010, 2007)?
Ezi ehihie Na obere nkuzi m ga-achọ igosi otu esi eme akara na Okwu. N'ozuzu, nke a bụ ajụjụ a na-ahụkarị nke siri ike ịza, n'ihi na Ọ bụghị ihe doro anya na akara nke ajụjụ. Ọ bụ ya mere m ji chọọ ịmepụta ụzọ anọ iji mepụta usoro dị iche iche. Ya mere, ka anyi bido ... 1 Usoro Ka e were ya na ị dere ederede na ịchọrọ ịdọrọ eriri n'usoro n'okpuru ya, t.
Nhọrọ ngwa ngwa nke paragraf ma ọ bụ ihe odide ederede na akwụkwọ Okwu
Mgbe ị na-arụ ọrụ na akwụkwọ na nchịkọta ederede MS Okwu mgbe mgbe ka ịhọrọ ederede. Nke a nwere ike ịbụ ihe niile dị na akwụkwọ ahụ ma ọ bụ akụkụ nke ya. Ọtụtụ ndị na-eme nke a na òké ahụ, naanị site na ịmegharị cursor site na mmalite nke akwụkwọ ma ọ bụ akụkụ nke ederede na njedebe ya, nke anaghị adị mfe mgbe niile.
Tinye brackets square na MS Okwu
Okwu Microsoft okwu ederede nwere nchịkọta ya na-arụ ọrụ na-enweghị njedebe, nke dị mkpa maka ịrụ ọrụ na akwụkwọ ọrụ. Ndị na-eji usoro a eme ihe mgbe nile, jiri nwayọọ nwayọọ na-eji ụzọ aghụghọ ya na ọtụtụ ọrụ bara uru. Ma ndị ọrụ na-enweghị uche nwere ọtụtụ ajụjụ gbasara otu esi arụ ọrụ.
Wepu ibe di na akwukwo Microsoft Word
Mgbe mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ na akwụkwọ na MS Word, ọ dị mkpa ịnyefee ndị ahụ ma ọ bụ data n'ime akwụkwọ. Karịsịa, ọ dị mkpa ka e nwee mkpa a mgbe ị mepụtara nnukwu akwụkwọ gị ma ọ bụ tinye ederede site na isi mmalite ndị ọzọ n'ime ya, ka ị na-ahazi ozi dịnụ.
Anyị na-etinye ihe ịrịba ama na ogo na Microsoft Word
Usoro ihe omume MS Word, dịka ị maara, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ ọ bụghị naanị na ederede, kamakwa na njiri data. Ọzọkwa, ọbụna ohere ya abụghị nanị nke a, anyị edekwararịrị banyere ọtụtụ n'ime ha n'oge gara aga. Otú ọ dị, na-ekwu okwu kpọmkwem banyere nọmba, mgbe ụfọdụ mgbe ị na-arụ ọrụ na akwụkwọ dị na Okwu, ọ dị mkpa iji dee nọmba na ike.
Anyị na-etinye akara ama na MS Word
Dị ka ị maaraworị, na Microsoft Word enwere nnukwu nchịkọta nke ihe odide pụrụ iche na akara, nke, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike itinye ya na akwụkwọ ahụ site na iche iche menu. Anyị edeworị banyere otu esi eme nke a, ma ị nwere ike ịgụtakwu banyere isiokwu a n'isiokwu anyị. Ihe nkuzi: Ịnye ihe odide pụrụ iche na akara na Okwu Na mgbakwunye na ụdị edemede na akara ọ bụla, ị nwekwara ike itinye ụdị nhazi dị iche iche na usoro mgbakọ na mwepụ na MS Okwu site na iji ndebiri dị njikere ma ọ bụ mepụta onwe gị.
Weghachite HTML faịlụ na akwụkwọ MS Text ederede
HTML bụ asụsụ hypertext markup haziri na Internet. Imirikiti nke ibe na Web Wide Web nwere nkọwa nkọwa na-eme na HTML ma ọ bụ XHTML. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ kwesịrị ịmegharị faịlụ HTML gaa na onye ọzọ, dịka a ma ama ma choro ọkọlọtọ - ihe ederede ederede Microsoft Word.
Kwado ma ọ bụ gbanyụọ ngosipụta nke arịlịka na Microsoft Word
Otu arịlịka na MS Word bụ akara nke gosipụtara ebe ihe na ederede. Ọ na-egosi ebe a gbanwere ihe ma ọ bụ ihe ndị ahụ, na-emetụta àgwà nke ihe ndị a dị na ederede. A pụrụ iji arịlịka dị na Okwu tụnyere otu aka dị na azụ nke etiti maka foto ma ọ bụ foto, na-enye ya ohere ka ọ dịrị na mgbidi.
Debe ederede na Microsoft Word akwụkwọ
Okwu MS, dịka nchịkọta ederede ọ bụla, nwere nnukwu ụyọkọ fon na ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịgbasawanye ya site n'enyemaka nke ụyọkọ ndị ọzọ. Ha niile dị iche na ihu, ma mgbe niile, n'Okwu n'onwe ya, enwere ike ịgbanwe ọdịdị nke ederede ahụ. Ihe omumu: Otu esi tinyekwuo ihe ederede na Okwu Na mgbakwunye na elele anya, enwere ike inwe obi ike, italic ma gosi ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © Okwu 2020